हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ? - LiveMandu
नेपालमा आज भोलि धेरै मानिसलाइ सताउने समस्या भनेको ब्लड प्रेसर भएको छ । खानपानमा ध्यान नदिने, सधै समस्यामा मात्र देख्ने जस्ता समस्याको कारण मानिसको प्रेशर कम वा बढी हुने गर्दछ । हाई बीपी हृदय रोगको इशारा हुन सक्छ । डायटमा सैचुरेटिड फैट जस्तो कि मक्खन, घ्यू, तर आदि कम गर्नुस् । किनकी यसले मुटुको नली बन्द हुने खतरा बढ्छ । जति सकिन्छ, लो फैट डायट लिनुस् ।
Tags: blood pressureHealth tipshealthy foodस्वास्थ्यहाई ब्लड प्रेसर
25 Years of Justin Bieber
बेल्जियमको आखाँमा नेपालका तस्विरहरु (नेपाल पर्यटन बोर्डमा फोटो प्रदर्शनी हुदै )